Shijiazhuang Teneng Electrical & Mechanical Equipment Co., Ltd. na umenzi wocikizeko umgca nge welding kwemveliso umbhobho sentsimbi, umqulu abandayo uyila umgca, uqhoqhoqho umgca, wonqanyulwa,-to-ubude line kunye nezixhobo ezinxulumene abangabancedani. inkampani Teneng ke lweshishini yale mihla ezinako uphando kunye nophuhliso, imveliso kunye neentengiso. Teneng lilungu lebhunga of China Roll Ndiyila Association, ilungu umongameli Hebei Steel Tube Trade Association.
oomatshini Teneng na izixhobo kakhulu lemveliso tube ekhoyo ehlabathini. E China, abasebenzisi ezaziwayo-kakuhle Hebei Jingye Group, SANY Group, China imikhumbi Industry Corporation, Chongqing Changzheng Heavy Industry Co., Ltd njl
oomatshini Teneng asebenza kwamanye amazwe amaninzi ngaphandle China, ezifana
American, Portugal, Venezuela, Brazil, Paraguay, eRashiya, eUkraine, eJapan, Saudi Arabia, Sudan, Uzbekistan, Kazakhstan, Vietnam, India, njalo-njalo. Teneng wafumana iindumiso jikelele kubathengi bethu emhlabeni wonke ngenxa imveliso umgangatho ophezulu nokugqibelela inkonzo yasemva kwentengiso.
imfuno Customer ungamandla uqhuba nophuhliso lobugcisa, strong amandla Inkampani inkxaso ukuphuculwa ubuchwepheshe. inkampani Teneng liya kusebenzisana kunye nabenzi basekhaya angaphandle ukuba unikeze izixhobo ezikumgangatho ophezulu, iteknoloji yobungcali, inkonzo ephelele abathengi.
No. Of Employees : 150 ~ 200
Unyaka lwakhiwe : 2009
Ukususela ekusekweni, inkampani Teneng izibonelelo amakhulu imigca zemveliso kubathengi, siye ubutyebi amava obuchule. Phantsi ukhokelo kwiingcali basekhaya oonjingalwazi, Teneng ukulandelela iintshukumo nobuchwepheshe amazwe phambili, ingqondo, ubugcisa kunye nokuphuhlisa nengqele bhetyebhetye kwama technologies. izixhobo Teneng ebesebenzisa kumbhobho API, izithuthi, umbhobho yokwakha, umbhobho ifanitshala, inkonkxa mveliso, iiphaneli ucingo, izixhobo zemidlalo njalo njalo.
inkampani Teneng nezigidi yesikwere seemitha mveliso, kwaye ube nenkqubo nolungelelaniso eyomeleleyo kunye zentsimbi kunye ukungunda kwaso. kwamalungu esiqhelo Izixhobo zikhethiwe imveliso lwamashishini ezaziwayo-kakuhle, ukusebenza oluncediswayo ngemveliso kunye nobomi nkonzo. Ukusuka candelo processing ukuya kwindibano umatshini, senza iitshekhi kuwo onke amanqanaba, baze baqhubeke inkqubo uxanduva yemveliso. Emva siqu yenkonzo ukuqeqesha evela ndlela, benza izixhobo kokugunyaziswa iminyaka emininzi, ukusombulula iingxaki ezahlukeneyo practice imveliso, ufakelo izixhobo isikhokelo kunye nabasebenzi uqeqesho abathengi.
yomelelani nincedwa ngamandla zobugcisa kunye nenkqubo inkonzo egqibeleleyo siyintsika Teneng kaThixo.
Teneng babe iinjineli uyilo 15 no-80 ikhomishini yinjineli, bonke bephela babe neminyaka engaphezu kwama-15 amava kushishino tube lokusila. abasebenzi Teneng lusoloko uhamba enyeleni phambili kwezobugcisa, ngomkhondo nokuqhubekayo technology ityhubhu okusila, ngaphakathi kwi emarikeni kunye abacombululi imfuneko loMthengi, ukwenza ezintsha ubuchwepheshe advanced ezisetyenziswa iimveliso.